- सम्झना घिमिरे | काठमाडाैं, चैत ८
‘तितेपाती टिपेर पनि कमाइ गरिएला र ?’
‘पागल त भएनौँ ? उपचार गर्ने मान्छे बन्छौ भनेको तितेपाती खोजेर बस्न पो थालेछौ त ।’
यी र यस्तै व्यंग्यसहितका प्रश्नहरू आजभन्दा १२ वर्षअगाडि काठमाडौं सीतापाइलाका ईश्वर बलामीलाई हरेक दिनजसो आउँथ्यो । उनी प्रश्न सोध्नेहरूलाई नै उल्टो संकलनका लागि आग्रह गर्थे, सँगै त्यसबापतको पैसा दिने बाचा पनि । ‘पैसा दिन्छु भन्दा कतिपयले टिपेर ल्याउनुहुन्थ्यो, मैले किलोका दरले पैसा दिन्थेँ तर कतिले भने हाँसेर उडाउँथे,’ बलामी भन्छन्, ‘पैसा दिन्छु भन्दा काम गर्ने मान्छेसमेत आउँदैनथे । त्यति हुँदा पनि मैले काम गर्न छोडिनँ ।’
एक्लै तितेपातीको खोजीमा उपत्यकामा भौँतारिने उनका पाइला व्यंग्यसहितका प्रश्नले भने रोकिएनन् । समय परिवर्तन भयो । तितेपाती संकलन गर्न उपत्यका चहार्ने बलामीले कम्पनी सुरु गरेकै १२ वर्ष बितिसकेकाे छ ।
एक्लै तितेपाती टिप्न थालेका बलामीसँग अहिले २० जनाको समूह छ । हिजो 'होला र ?' भन्दै नाक खुम्च्याउनेहरूको जग्गाभरि नै तितेपाती लगाइएको भेटिन्छ भने खोजीखोजी जंगली तितेपाती टिप्नु उनै छिमेकीको दैनिकी बनेको छ ।
‘अहिले त पैसा कमाउन छोडेर के यस्तो काम गरेको भन्ने तिनै मानिसहरू मकहाँ तितेपातीखेतीबारे बुझ्न आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘खेती गर्ने तरिका सिकाइदिएर म उनीहरूबाटै तितेपाती किन्छु ।’
खेतीको रूपमा भर्खरै लगाउन थालिएको तितेपाती नेपालीको घरघरमा पाइन्छ र प्रयोग हुन्छ पनि । कसैले औषधिका लागि त कसैले मलका लागि पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । धार्मिक रूपले पनि शुद्ध मानिने हुनाले यसको प्रयोग सम्भवत: हरेक घरमा हुँदै आएको छ । यसबाट तेल र स्यानिटाइजर उत्पादन भए पनि यसको मोक्जा (भुवादार तितेपातीबाट निकालिएको भुवा) बनाएर व्यवसाय गर्नेचाहिँ आफू एक मात्र व्यवसायी भएको बलामी दाबी गर्छन् ।
उनले जापानी कम्पनी यमासोको लगानी र आफ्नो सीपलाई फ्युजन गरेर विगत १२ वर्षदेखि सीतापाइलामा ‘यमासो प्राइभेट कम्पनी’ र ‘दिव्य सञ्जीवनी आयुर्वेद अस्पताल’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुका साथै औषधि पनि उत्पादन गरिरहेका छन् ।
जापानमा घरगाउँको तितेपाती भेटेपछि...
व्यवसायीको रूपमा चर्चा कमाएका बलामी अकुपंचरिस्ट हुन् । सन् १९९३ मा अकुपंचर उपचार विधि पढिरहेका उनले सोही समयमा तीन महिनाका लागि जापान जाने मौका पाए । जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय अकुपंचर एक्जिबिसन चलिरहेको थियो । ‘एक्जिबिसनमा धेरै र महँगा औषधिहरू, उपचार गर्ने पद्धतिहरू होलान् भनेको त हाम्रै घरवरिपरि कुहिरहेका तितेपाती पो भेटेँ,’ उनी भन्छन्, 'पढाइका क्रममा चिनियाँ ट्रेडिसनल मेडिसिनका बारेमा थाहा पाएको थिएँ, जसमा मोक्जिबेसन उपचार विधिमा तितेपातीको प्रयोग हुने रहेछ भन्ने पहिलो पटक थाहा पाएँ ।’
घरमा झाडी भयो भनेर आगो लगाएको तितेपाती करोडौँको मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको देखेपछि लोभिएका उनी यसबारे थप बुझ्न जापानी कम्पनी ‘यमासो’मा पुगे, जहाँ तितेपातीबाट मोक्जा (तितेपातीबाट निकालिने भुवा) बनाइन्थ्यो । सो मोक्जालाई नसा, हड्डी तथा हाडजोर्नी, बाथ, नसा च्यापिएकोलगायतका नसर्ने रोगहरूको उपचारमा प्रयोगका लागि तयार पारिन्थ्यो ।
मोक्जिबेसन प्रविधिबाट उपचार गराउँदै बिरामी
बलामीले मोक्जिबेसन प्रविधिबाट नसर्ने रोगहरूको उपचार गर्न सकिने कुरा थाहा पाएका थिए तर नेपालमा मोक्जाको प्रयोग नभइसकेकाले पनि यसको कच्चा पदार्थबारे खासै ध्यान गएको थिएन ।
यमासो पुगेपछि भने उनले नेपालमा पाइने तितेपातीको गुणस्तर र जापानमा मोक्जाका लागि तयार पारिने तितेपातीको गुणस्तरबीच तुलना गर्न थाले । नेपालमा कुल २२ प्रकारका तितेपाती पाइने रहेछन् । त्यसमा पनि पातको तलपट्टि वा एकतर्फ सेतो भुवाजस्तो देखिने तितेपाती मोक्जा बनाउन उपयुक्त मानिने रहेछ । नेपाल फर्किएलगत्तै उनले सोही कम्पनीलाई स्याम्पलस्वरुप नेपाली तितेपाती जापान पनि पठाए । कम्पनीले नेपाली तितेपातीलाई उच्च गुणस्तरीय ठहर्‍यायो । सँगै लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि ।
मोक्जाका लागि तयार पारिने भुवादार तितेपाती
त्यो देखेर हौसिएका उनले यमासोको प्रस्ताव स्वीकारेर ६५ लाख रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्र्याए । नाम राखे उही ‘यमासो प्राइभेट लिमिटेड’ नै । ‘लगानी जापानी कम्पनीको भएकाले मैले नाम पनि उही राखेको हुँ,’ उनी भन्छन् ।
सन् २०११ मा सितापाइलामा सुरु गरेको यमासो कम्पनीले हाल बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँबराबरको तितेपातीको मोक्जा विदेश निर्यात गर्दै आएको छ । सञ्चालक बलामी बर्सेनि ३० देखि ४० लाख नेपाली रुपैयाँबराबरको मोक्जा जापान पठाउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मोक्जाको माग धान्नै सकिएको छैन । उपत्यकाबाहिर पनि हामीले तितेपातीको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छौँ तर पनि माग धान्ने अवस्थामा छैनौँ हामी ।’
मोक्जा प्याकेजिङ गर्दै कर्मचारीहरू
बलामीका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक रूपमा तितेपातीको खेती नुवाकोट, धाधिङ, संखुवासभा, पाँचथर, फिदिम, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा हुँदै आएको छ । जहाँबाट उनले सुकाएको तितेपाती प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउँछन् । भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ तीन जिल्लामा खोल्साखोल्सीदेखि जंगलमा प्रशस्तै पाइए पनि व्यावसायिक रूपमा खेती भने हुन सकेको छैन ।
उनी भन्छन्, ‘यहाँ जंगलमा खोजेर ल्याउने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ । उपत्यकाबाहिर भने बाह्रैमास यसको खेती गर्न थालिएको छ ।’ बलामी यसरी अरुले ल्याएको तितेपातीको सुकेको पातलाई प्रतिकेजी ५० रुपैयाँका दरले किन्छन् ।
जंगलमा पाइने र खेती गर्दा पनि मलजल गरिरहनु नपर्ने तथा बाह्रैमास टिप्न मिल्ने हुनाले पनि किसानले सजिलै कमाउन सक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पाँच रोपनीमा लगाउने किसानले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ । खर्च नलाग्ने हुनाले पनि यो खेतीलाई धेरै दु:ख गर्नुपर्दैन । सजिलो छ ।’
तितेपातीको माग धान्नै गाह्रो
खेतबारी तथा जंगलबाट संकलित तितेपाती यमासोमा प्रशोधन भएर हिमालयन मोक्जा ब्राण्डमा विदेशिन्छ । तर त्यसअघि यसका चरणहरू भने थुप्रै छन् । प्रशोधन काममा खटिँदै आएका कर्मचारी प्रकाश प्रधान संकलन गरिएको सुकेको तितेपातीलाई पहिलो चरणमा शुद्धीकरण गर्ने बताउँछन् ।
जसका लागि एउटा कोठामा संकलित तितेपातीलाई बिजुलीको सहायतामा ७० डिग्रीको तापमा राखिन्छ । १२ घण्टासम्म तातिँदा तितेपातीमा रहेका किटाणुँ मर्छन् । त्यसपछि भने सुकाइएको तितेपातीलाई मेसिनमा राखेर पिस्ने गरिन्छ ।
यसरी पिसिएको तितेपातीबाट धुलो मात्रै भने निस्कँदैन । ‘ऊन’ जस्तै स्वरुपमा भुवाहरूका डल्ला निस्कन्छन् धुलोसँगै । त्यसपछि धुलो र ती भुवाहरूका डल्लोलाई छुट्याउने काम गरिन्छ मेसिनबाटै । यसरी भुवालाई धुलोरहित बनाइन्छ । जसलाई ‘मोक्जा’ भनिन्छ ।
सामान्यता किसानबाट लिइएको १ सय केजी सुकेको तितेपातीबाट ५ देखि ८ केजी मोक्जा निस्कन्छ । १ सय केजी तितेपातीबाट मोक्जा बनाउँदा ३० हजार आम्दानी हुने गरेको छ । उनी वार्षिक ३० लाखभन्दा बढीको मोक्जा निर्यात गर्छन् ।
यी मोक्जालाई सामान्य प्याकेजिङले काम गर्दैन । त्यसैले सञ्चालक बलामीले २० जना कर्मचारीलाई प्याकेजिङ गर्ने काममा खटाएका छन् ।
विशेष प्रकारको मेसिनद्वारा मोक्जालाई पातलो सिन्का बनाइन्छ । कागजले बेरेर मोक्जालाई सुरक्षित गरिन्छ । यसरी सिन्काहरू बाकसमा राखेर यसको प्याकेजिङ गरिन्छ र नाम दिइन्छ हिमालयन मोक्जा । यसरी तिनै मोक्जाले भरिएका बाकसहरू विदेश पठाइन्छ लाखौँको मूल्यमा ।
बर्सेनि लाखौँको कमाइ
गत आर्थिक वर्ष २० टन मोक्जा जापान निर्यात गरेका बलामीले आगामी तीन वर्षमा ६० टन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उनले ३० देखि ४० लाख नेपाली रुपैयाँबराबरको मोक्जा जापान निर्यात गरेका छन् । अब भने त्यसलाई बढाएर करोडमा पुर्‍याउने उनको सोच छ । जसका लागि सामूहिक खेतीदेखि जंगली तितेपाती संकलनलाई विस्तार गर्दै लैजाने उनको योजना छ ।
यति मात्र नभएर अहिले उनले यसरी तितेपातीखेती गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सल्लाहसमेत दिँदै आएका छन् । ‘तितेपातीको भविष्य एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा औषधि बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा माग बढ्दै गए पनि मोक्जा उत्पादन भने चारवटा देशमा मात्रै हुन्छ ।’
नेपाली उत्पादन हुने मोक्जा सबैभन्दा पहिले चीनमा सुरु भएको हो । चिनियाँ परम्परागत उपचार पद्धति भएकै कारण पनि पहिलो उत्पादनकर्ता देशको रूपमा चीनलाई लिइन्छ । तर, उक्त उपचार पद्धति विश्वभर फैलिइरहँदा उपचारका लागि चाहिने मोक्जा भने जापान, कोरिया र नेपालमा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘म त भन्छु पैसा खाडीमा भन्दा धेरै तितेपातीको झाडीमा छ ।’
तस्वीरहरू : सुशील श्रेष्ठ
समुद्रबाट होइन, सानो पोखरीबाटै मोती उत्पादन
‘हम चित्र बनारहल्छी हमर मिथिलाकी’
अब आकाशमै गर्नुस् डिनर : अँगेनोले जमिनदेखि आकाशसम्म फैलाउँदैछ व्यवसाय
‘द भिलेज क्याफे’ जहाँ चार सयथरीका नेवारी परिकार खान पाइन्छ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ८, २०७८, ०९:११:००